Al Shabaab & Xiriirka ka dhaxeeya Mas’uul kasoo jeeda Dalka Qadar. – idalenews.com
Al Shabaab & Xiriirka ka dhaxeeya Mas’uul kasoo jeeda Dalka Qadar.
Nin lagu magacaabo Abdul Rahman al-Nuaimi oo madax ka ahaa hey’adda bina’aadanimada ka shaqeysa ayaa lagu eedeyay in uu dhaqaale farbadan ku taageri jiray dagaalyahano xiriir la ah uru weynaha Al Qaeda,ee ka dagaalama inta udhexeysa dalalka Yaman iyo Syria iyo Ciraq iyo Somaliya.
Warbixinta ayaa xuseysa in Abdul Raxmah uu fadhiyay xarunta websate halkaasinaah dhaqaale uu ugu gudbinjiray dagaalyahanada.
Abdul Rahman al-Nuaimi,ayaa la sheegay in uu ku suganaa magaalada Doha ee dalka Qadar,Wasaarada Maaliyada Mareykanaka,gaar ahaa waxdeeda Hantidhoorka,ayaa shegtay in eedeysanaha uu bil kasto ku taageerayay dhaqaale gaara “$2 million (£1.2 million) kooxaha islaamiinta ee ka dagaalada Somaliya,Ciraaq iyo suriya.
Shaqsigaan lagu edeynayo taageerida islaamiinta ayaa la sheegay in 60 Sano uu professor ka ahaa at Qatar University.isagoona sidoo kale ahaa madaxweynihii xiriirka kubadda cagta ee Qatar Football Association.
Sidoo kale waxda hanti dhoorka mareykanka ayaa sheegtay in Abdul Rahman uu ahmar in AlQaeda suriya la siiyo $600,000 (£366,000),sidoo kale waxaa lagu eedeyay in uu gacan libaaxleh uu ka ciyaaray taageerida faragalintii mareykanka uu ku galay dalka ciraaq sanadkii 2003.
Sidoo kale waxaa uu gacan siiyay xagaagii 2007, laba Islaamiyiinta Soomaaliyeed oo caan ka ahaa dalka Somalia oo tagay dalka Qadar gaar ahaa Magaalada Doha si ay ugu biiraan Al-Qaeda.
Dawlada wadanka Yemen oo heshiis xaabd joojin a la galeeysa Xogaga Shiicada ee Xuuthiyinta
Dekada Muqdisho oo maanta si rasmi ah ula wareegtay Shirkad Turki ah.